Rugta Caafimaadka Xashiishadda Caafimaadka ee ugu Horreysa ee Iskotland waxay soo jiidataa in ka badan 500 bukaan ah Toddobaadka Furitaanka • Dawooyinka Inc.eu
Rugta caafimaadka ee ugu horreysey ee sharciyeysan ee xashiishka ayaa sheegtay inay ku soo dhoweysey in ka badan 500 bukaan cusub Scotland iyada oo loo marayo latashiyo fog fog inta lagu jiro usbuuca furitaankiisa (sababo la xiriira tallaabooyinka hadda loo yaqaan 'corona tallaabooyinka).
Rugaha Caafimaadka Safayr ku dhawaaqay bishii Maarso inay ahayd diiwaangelintii ugu horreysay ee Iskotland ee HealTHCyihiin Hagaajinta Scotland si ammaan ah loogu qoro xashiishadda caafimaadka ee Scotland bukaanka.
Waxay rajeyneysaa inay awoodo inay sameyso ballamo shaqsiyeed markii laga qaado xayiraadihii uu keenay cudurka corona aafada.
Bishii Nofeembar 2018 xashiishadda dawada ee Boqortooyada Ingiriiska sharciyeeyay si dhakhtarradu ugu qori karaan xaaladaha qaarkood. Daawooyinka ku saleysan Cannabis waxaa loo tixgelin karaa xaalado kala duwan oo kala duwan, oo ay ku jiraan arthritis, walwal iyo suuxdin.
Waxay u adeegsan doontaa xogta bukaanka Iskotishka ee Diiwaanka Cannabis ee Caafimaadka ee UK si ay u qaabeyso aasaaska sayniska ee loo qoro xashiishadda caafimaadka. Waxay sidoo kale bixin doontaa barnaamij lagu caawinayo bukaanada aan awoodin inay iska bixiyaan qarashka qaaliga ah ee isticmaalka rugta caafimaadka ee kuwa ku qoran Diiwaanka Cannabis ee Caafimaadka UK.
Macluumaadka bukaanka Scottish-ka ee Diiwaanka Cannabis ee Caafimaadka ee Boqortooyada Ingiriiska (afb.)
Shirkaddu waxay u xilsaartay codbixin YouGov ah oo laga qaaday 10.000 oo qaangaar ah oo reer UK ah si ay u helaan dareen ah fahamka dadweynaha CBD. Waxay ogaatay in 23% dadka ay dhahaan waxa ugu weyn ee hortaagan helitaanka xashiishada caafimaad waa hubaal la'aanta inay sharci tahay iyo inkale - laba sano kadib markii horey loo sharciyeeyay.
Waxay ogaatay in 9% dadku ay qaataan wax soo iibsiga dukaanka ee loo yaqaan 'CBD' ama kan dhakhtarku qoro oo 85% dadku ma oga in xashiishadda daawadu ay ka qaalisan tahay fayo-qabka CBD.
Marka laga hadlayo codbixinta YouGov, Dr. Mikael Sodergren, Agaasimaha Maamulka & Hogaaminta Tacliinta ee Sapphire Medical wuxuu leeyahay faallooyinka soo socda:
Tirakoobyadu waxay si cad u muujinayaan in loo baahan yahay waxbarasho dheeraad ah oo ku saabsan xashiishadda dawada ah, oo lagu muujiyey xaqiiqda ah in ku dhowaad rubuc ka mid ah dadweynaha aan weli ogayn in xashiishadda dawada ay sharci tahay.
Si loo daboolo farqiga u dhexeeya waxbarashadan, Sapphire Medical waxay aasaaseen Diiwaanka Cannabis ee Caafimaadka ee UK, oo ah diiwaangelin ballaadhan oo mustaqbalka ah oo loogu talagalay in lagu soo ururiyo natiijooyinka daaweynta xashiishadda daawada.
Ujeedada diiwaangelintu waa in la ballaariyo fahamkeenna ku saabsan xashiishad caafimaad oo daaweyn ka ah Boqortooyada Midowday iyadoo la ururinaayo lana falanqeynayo xogta caafimaadka, waana ku faraxsanahay in bukaanada Scottishku ay gacan ka geysan doonaan horumarintiisa. ”
Rugaha Caafimaadka Sapphire waxay ahaayeen rugta caafimaad ee ugu horreysay ee UK oo ay diiwaangeliso Guddiga Tayada Daryeelka, oo bixisa la-talin xirfadeed oo ku saabsan xaalado caafimaad oo kala duwan oo xashiishka caafimaad uu faa'iido u yeelan karo. Iyada oo qayb ka ah himilada bukaan-socodka ee lagu hagaajinayo helitaanka bukaanka ee dawooyinka xashiishadda dawada ee UK, Sapphire waxay sidoo kale la shaqeyneysaa Sapphire Medical Foundation si ay gacan uga geysato yareynta caqabadaha dhaqaale ee helitaanka xashiishadda caafimaadka loona siiyo qof kasta oo u baahan. la heli karo.
Bukaanku aad ayey ugu faraxsan yihiin horumarkan:
Waan ku faraxsanahay inaan hadda fursad u helay inaan ka helo xashiishad caafimaad xaaladdayda xanuunka ee joogtada ah. Adeeggu wuxuu u socday si habsami leh waxaana la iga wargeliyay inta hawshu socotay. Waxaan rajeynayaa inaan isticmaalo wax ka yar daawooyinka opioid ee aan ku xayiranaa sanado. “
Ilaha waxaa ka mid ah BBC (EN), Canex (EN), HealthEurope (EN), Gudaha (EN), The Herald (EN)
CBDsharci ahaansharciyeyntadaawo cannabisdaawada cawskacilmi baarisIskotlandBoqortooyada Ingiriiska
CBD waxay yareysaa astaamaha arthritis ee eeyaha
Cilmi-baareyaal ka socda Baylor College of Medicine oo kaashanaya Medterra CBD ayaa sameeyay daraasadihii ugu horreeyay ee saynis ...
Weed & Coronavirus: Tilmaamaha Nadiifinta Qalabkaaga Xashiishadda
Maaddaama ummaddeennu ay sii wadaan inay maraan fayraska 'coronavirus' (COVID-19) ee safka ah, nadiifi ...
3 Siyaabood oo xashiishku u wanaajin karo nolosha haweenka
Faa'iidooyinka caafimaad ee ay xashiishku siin karaan haweenka ayaa ah mid aan la qiyaasi karin, gaar ahaan marka la barbar dhigo ...